Dhageyso sir culus: "Hantidi qaranka ee XAMAR waxba kama harin waa la wada xaraashanayaa"!! - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso sir culus: “Hantidi qaranka ee XAMAR waxba kama harin waa la...
Dhageyso sir culus: “Hantidi qaranka ee XAMAR waxba kama harin waa la wada xaraashanayaa”!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Nuur Jimcaale Faarax oo u waramayey idaacadda codka Maraykanka (VOA )-da ayaa si weyn uga hadlay hantida qaranka iyo weliba dhibaatada musuq maasuqa ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya.
Nuur Jimcaale oo ay su’aalo ku saabsan mowduuca hantida qaranka la weydiinayay ayaa ka hadlay hantida qaranku lee yahay ee mudooyinkii ugu dambeeyey laga rarayey dadkii deganaa dhowr iyo labaatankii sano ee dowlad la’aanta ay ka jirta dalka.
Waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in dad gaar ah la siinayo hantidii qaranka, oo ay arrintaas ku lug lee yihiin mas’uuliyiin sare.
“Hantidii qaranka ee Muqdisho waxba kama haran, waa la wada iibsanayaa” ayuu yiri.
Halkan hoose ka dhageyso wareysiga.